Deepika oo qof walbo qiiro galisay kadib markii ay soo bandhigtay aragtida kowaad filimkeeda Chhapaak – Filimside.net
Deepika oo qof walbo qiiro galisay kadib markii ay soo bandhigtay aragtida kowaad filimkeeda Chhapaak
Mararka qaar filimada fariimaha ay xambaarsan yihiin inta aan la daawanin ayay dadka qiiro galiyaan sidaas ayaa lagu qayaxi karaa Deepika Padukone filimka ay haatan ku mashquulsan tahay shaqadiisa ee lagu magacaabo Chhapaak madaama aragtida kowaad laga soo bandhigay qof walbo qiiro galisay.
Waxaan maalmo ka hor idinla wadaagnay in Deepika ku guda jirto isku diyaarinta duubista filimkeeda Chhapaak balse maanta ayay si rasmi ah shaqada filimkan u bilaabatay waxaana lagu duubayaa magaalada Delhi waxayna Deepika ku jileysaa gabbar wajiga aashito looga shubay oo geeri ka bad baaday.
Qof walbo wuxuu la qiirooday wajiga Deepika loo sameeyay oo ka matalaayo xili aashito looga shubay waxaana la wada sugi weesan yahay filimka Chhapaak fariintiisa dhameestiran in la daawado marba haddii aragtidiisa kowaad saameyntan adag ay reebtay sidoo kalena Deepika waa atirisho awood badan dhanka shaashada saameyn lixaad leh la imaato marwalbo.
Vikrant Massey ayaa door adag ku leh filimka Chhapaak kuna jilaayo Deepika jaceylkeeda asigoo dhibaato walbo la qeebsanayo kuna garab siinayo inay nolosheeda hadafka ay leedahay ka gaarto inkastoo wajiga aashito looga shubaayo dhibaato badana ay la kulmeyso.
Deepika ayaa filimka Chapaak ku jileyso magaca Malti gabbar ka bad baaday aashito wajiga looga shubay waxaana filimkan Director ka ah Meghna Gulzar oo ku caan baxday sameynta filimada fariimaha waaqiciga ah xambaarsan ayadoo sanadkii hore Hindiya ku qabsatay filimkeedii Raazi ee Alia Bhatt hogaamiye ka ahayd.
Sidoo kale Deepika ayaa filimkan wax ka maal galineyso shirkadeeda KA Entertainment ayaa soo saarayaasha ka mid ah qorshahana wuxuu yahay in mashruucaan saameynta adag reebi karo in la daawado 10 Jan 2020.
Waxaa Aqrisay 598